फिल्मका कथामा अभिनेत्रीहरू यति भावुक अभिनय गर्छन् कि नरोई कहाँ सुख पाइन्छ र ?
तर जब वास्तविक जिन्दगीमा पनि उनीहरूको रुने दिन आउँछ तब कथाले अर्कै मोड लिन्छ। बलिउडमा पनि धेरै अभिनेत्रीको रुने दिन आएको छ। शनिबारको दिन बलिउडका केही अभिनेत्रीका लागि निकै दुःखद रह्यो। त्यसमध्ये एक थिइन्, दीपिका पादुकोण। नार्कोटिक्स सेन्ट्रल ब्युरो (एनसीबी)सँग सोधपुछका क्रममा दीपिका तीनपटक रोएको बताइएको छ।
दीपिका तीन÷तीनपटक रोएपछि एनसीबीका अधिकारीले उनलाई इमोसनल कार्ड नखेल्न सल्लाह दिएका थिए। एनसीबीका अधिकारीले हातै जोडेर उनलाई रुनुको साटो वास्तविकता बताइदिन आग्रह गरे। दीपिकाले सबै कुरा साँचो बोले मात्रै उनका लागि राम्रो हुने बताइयो। उनको मोबाइलसमेत जफत गरिएको छ।
दीपिकाले च्याटमा सहभागी भए पनि आफूले लागूऔषध सेवन गरेको तथा ओसारपसार गरेको आरोप अस्वीकार गरेकी छन्। अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
फोरजीमा आश्चर्यजनक वृद्धि !
नेपालमै शुरू भयो अक्सिजन उत्पादन
खम्बा गाड्ने क्रममा करेन्ट लागेर एक जनाको मृत्यु
बिपी प्रतिष्ठानमा थप सङ्क्रमितको मृत्यु
संघको निर्णयविरुद्ध जुर्मुराउँदै प्रदेश सरकार, सुदूरपश्चिममा पनि कोरोनाको उपचार नि:शुल्क
आर्मेनियाविरुद्धको युद्धमा अजरबैजानलाई खुलेर समर्थन गर्दै टर्की, तेस्रो विश्वयुद्धको खतरा
तस्करबाट मारिएका प्रहरीका परिवारलाई २/२ लाख दिने प्रदेश सरकारको निर्णय